I-Puglia bell tower B&B Design 1 - I-Airbnb
I-Puglia bell tower B&B Design 1
Igumbi e-i-bed and breakfast ibungazwe ngu-Michele
Ukukhansela kwamahhala ngaphambi komhla ka-Eph 12.
Enkabeni yesikhungo esingokomlando sase-Andria, esakhiweni sengxenye yesibili yekhulu lesishiyagalombili elilungiswe ngobuchwepheshe, uzothola i-B&B Campanili di Puglia.
Indawo yokuhlala yindlu enhle elondoloze ngokuqinile izici zokwakha zasekuqaleni. Isitayela esikhethekile nesisebenzayo sokunikeza okokuzithokozisa kokuhlala okungenakulibaleka.
Ama-vault athandekayo e-gothic arches, ithala le-panoramic nendawo yokuphumula ebheke imibhoshongo emithathu yensimbi inikeza umuzwa wokwamukelwa okujwayelekile kwe-Puglia.
Isakhiwo esingokomlando sakhelwe emazingeni amathathu futhi sinendawo yokungena/indawo yokwamukela izivakashi enezinkalo ze-Gothic tuff kanye nodonga lwamatshe oluvulekile. Ezingeni elifanayo yigumbi lokuqala eline-vault "Barrel" negumbi lokugezela langasese. Esitezi sokuqala kunamakamelo okulala amabili anezinto zokhuni ezimhlophe ezingafihlekile futhi kokubili anendlu yokugezela yangasese. Ezingeni eliphezulu yikhishi nethala elibanzi lapho ungajabulela khona izinqaba ezintathu zensimbi nombhoshongo wewashi.
Gli ospiti possono utilizzare ed intrattenersi sulla terrazza panoramica completa di arredi da esterno, la stessa dove vengono preparate e offerte le colazioni.
Endlini kunekhishi elivamile elinethezekile, elinomshini wokugeza izitsha, uhhavini nezitsha, elitholakalayo ezivakashini ezinezindleko ezengeziwe.
Ukushintshwa kwamashidi namathawula kumahhala futhi kuqinisekisiwe njalo ngemva kobusuku obuthathu obulandelanayo noma uma kucelwa, ngemali eyengeziwe.
Ama-vault athandekayo e-gothic arches, ithala le-panoramic nen…
Via Corrado IV di Svevia, 62, 76123 Andria BT, Italy
I-Campanili B&B e-Puglia isenhliziyweni yesikhungo esingokomlando sase-Andria, indawo ebalulekile yokuqala yokuvakashela idolobha lase-Federiciana, i-Castel del Monte namadolobha azungezile. Edolobheni elidala singathola izindawo eziningana zomlando nezenkolo, kanye nezindawo eziningi zokudlela nezitolo zokuthenga.
Ngizotholakalela ukungena nokuphuma kanye nanoma yiziphi izidingo zezivakashi